नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन १७, २०७७, १४:५७
काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्की बैंक्वेटमा भोज खान मानिस बोलाएर सही गराउँदैमा बहुमत नहुने दाबी गरेका छन्।
सोमबार पोखरामा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफैंले हस्ताक्षर गरेर वैधानिक नहुने दाबी गरे। ‘कार्की बैंक्वेटमा भोज खान बोलाएर, भोज खान आएका मानिस जम्मा गरेर बहुमत भनेर हुन्छ? ’ ओलीले भने, ‘सक्नुहुन्छ भने दलको नेता र अध्यक्षबाट हटाउनुस्। बैठक बोलाउँछु, आउनुस्।'
उनले मुख्य सचेतक हटाउनु आफ्नो अधिकार भएको बताए। 'जुन हातले दिइको हो त्यही हातले काट्न सक्छ। मुख्य सचेतक बनाएको थिएँ, अहिले मैले हटाएँ। मैले बनाएको मैले हटाएर अर्को नियुक्त गरेँ। मैले जे गर्ने हो गरेँ', उनले भने।
उनले अहिले नकेपाकै प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजीमा दाैडादाैड गरिरहेको टिप्पणी गरे। 'माइतीघर मण्डल वा कार्की बैंक्वेटमा अध्यक्ष भएर आफैं लड्डु खाएर हुन्छ? विधि, पद्धति र प्रक्रिया खुबै सुन्नु भयो नि। कहाँ रहेछ प्रक्रिया?, उनले भने, 'केन्द्रीय कमिटी बैठकमा किन आउनु भएन ? बैठक बोलाउदाँ नआउने?'
जोसे माउरिन्हो टोटनह्यामकाे प्रशिक्षकबाट बर्खास्त
३७.५८ अंकले घट्यो नेप्से, पाैने ७ अर्बको कारोबार
संविधान रक्षाका लागि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण : नेता सिंह नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधान रक्षाका लागि पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। सोमबार, वैशाख ६, २०७८
असारसम्म ३ हजार बढी द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाइने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आगामी असार मसान्तसम्म तीन हजार ७८७ मुद्दा किनारा लगाउने गरी तयारी गरिएको जनाएको छ सोमबार, वैशाख ६, २०७८
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने जसपाका सांसदलाई मन्त्री बनाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाउने जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदलाई मन्त्र... सोमबार, वैशाख ६, २०७८